vokatra | Shijiazhuang Neming Import & Export Co., Ltd.
Akanjo fiofanana amin'ny soccer
Ekipa ekipa mpilalao baolina kitra
Fanamiana baolina kitra
Soccer Jersey sy Shorts
Akanjo mitaingina lehilahy
Tops mihazakazaka tsy misy tanany
Ny akanjo fanatanjahan-tena ataontsika dia natao hanomezana akanjo premium sy ahazoana aina ho an'ny atleta sy ireo tia fanatanjahan-tena. Izy ireo dia vita amin'ny fitaovana avo lenta sy maharitra.
Misy karazany maro ny lamba, toy ny landihazo, landihazo / poly / spandex mifangaro, polyester, viscose, nylon sns. Amin'ny maha-fangatahana azy samy hafa, ny lamba dia tsaboina amin'ny asa samy hafa, toy ny wicking sy maina haingana, anti-UV, anti-static , fanoherana fofona sns.
Andraso ny lamba miasa, misy ihany koa ny peta-kofehy isan-karazany, pirinty vita amin'ny landy, pirinty nomerika, pirinty silikika, embossing, pirinty famindrana hafanana hampiavaka anao sy ny kliobanao.
Ny fanatanjahan-tena ataonay dia misy: Jersey, Tee Shirt, Akanjo Polo, Tops & Shorts, pataloha, Suit Training, Joggers, Bibs sns. Namboarina tanteraka izy ireo.
Manome akanjo isan-karazany amin'ny fialam-boly amin'ny T shirt, lobaka Polo, sweatshirts, hoodies sns ianao. Hanana traikefa mitafy aina sy miala sasatra amin'ny fotoana tsy fiasana ianao.
Tsy maninona ny mijanona miaraka amin'ny fianakavianao na zavatra any ivelany, dia afaka mahita akanjo mety aminao ianao. Ny serivisy amin'ny bespoke dia misy ny fomba, ny refy, ny atin'ny lamba sy ny loko, ny logo sns. Izay rehetra ilainao dia hataonay ho anao. Izahay dia hanome anao ny akanjo mitafy mampiavaka anao.
Tsy vitan'ny hoe mamokatra ny akanjo fotsiny izahay fa mikarakara anao bebe kokoa…
Manolotra safidy fitafiana asa lehibe izahay, toy ny T shirt, polo Shirt, fanamiana, palitao fiarovana. Izy ireo dia novolavolaina tamin'ny lamba mateza, afaka miaina ary manokana mba hiarovana ny tontolo andro mandritra ny asanao. Ny akanjo fiasanay dia novokarina ara-stratejika ho an'ny toe-javatra iasana rehetra, ho toy ny lamba sosona, eo afovoany na ivelany.
Ny akanjontsika ivelany dia vita avy amin'ny fitaovana tena ilaina sy milamina. Hiaro anao sy hankafizinao amin'ny hetsika ivelany ataonao izany amin'ny toetrandro rehetra.
Izy io dia manao akanjo ski, akanjo orana, mpamaky rivotra, palitao volon'ondry, palitao softshell, palitao mitafy. Safidy tsara izy ireo amin'ny fitsangatsangana maraina, fanjonoana, fihazana, ski, tsy fitoviana, fitobiana, fiakarana an-tendrombohitra sns.